Iimarike ezintlanu zesitokhwe ezinokwenza ngcono kwi-2019 | Ezezimali
Yonke into ibonakala ibonisa ukuba lo nyaka awuzukuthandeka kwiimarike zezabelo, ngakumbi kumacandelo athile esitokhwe abonisa inkalo yobugcisabuthathaka kakhulu. Iya kuba lixesha lokuhlalutya ipotifoliyo yethu yotyalo-mali kwaye senze utshintsho kuyo ngeenjongo ezizodwa zokungabhaqwa kwizantsi ezinokuthi zenze ukuba abatyali mali abancinci nabaphakathi baphulukane nemali eninzi kwiinyanga ezilishumi elinesibini ezizayo. Apho imeko yezenzo zabo iya kuba sisilumkiso ngaphezulu kwezinye izinto zobuchwephesha.
Iingxelo zezezimali azikhuphi themba lingako malunga nokuba ungaba yintoni lo nyaka unzima wokurhweba. Ngale ndlela, i Fund International Fund (I-FMIE) isandula ukupapasha ingxelo "ye-World Economic Outlook" (Ingxelo ye-WEO), ethi iphuhlise ukukhula kwehlabathi ngo-2019 okuya kuqhubeka nokuzinziswa kwaye kwinqanaba elifanayo le-3,7% njengonyaka ophelileyo. Kwimeko ethile yaseSpain, i-IMF yehlisa uqikelelo loqoqosho lwaseSpain nge-2,2% ngo-2019. Oko kukuthi, izishumi ezintlanu ngaphantsi kwezo zaveliswa ngo-2018.
Kwelinye icala, kwinqanaba lehlabathi, ingxelo iqaqambisa ukuba ukukhula kudlula oko kufikelelweyo nakweyiphi na iminyaka phakathi kowama-2012 nowama-2016, ngexesha apho uqoqosho oluninzi lufikelele khona okanye lusondela ingqesho epheleleyo kwaye apho uloyiko lwangaphambili lokusasazeka luye lwasasazeka. Ke ngoko, abasemagunyeni kwezoqoqosho basenamathuba amahle okwakha ukomelela kunye nokuphumeza iinguqu ezomeleza ukukhula.
1 Amacandelo: amathuba oshishino
2 Indawo yokuhlala kunye namacandelo azinzileyo
3 Ilanga kunye nolwandle kuya kuqhubeka kuphuma
4 Ukubhankisha kungaphantsi
5 Enye into enokumangalisa: ubunewunewu
Amacandelo: amathuba oshishino
Uphengululo lukwahluka ngokobume bendawo, kwaye lubandakanya uqoqosho olukhulu lweLatin American (iArgentina, iBrazil neMexico), uqoqosho oluhlumayo lwaseYurophu (Turkey), South Asia (India), East Asia (Indonesia neMalaysia), Middle East (Iran). kunye neAfrika (Mzantsi Afrika). Zonke ezi zinto zixabisekileyo kufuneka ziqokelelwe kukhuseleko oludweliswe kwiimarike zezabelo. Kodwa akukho mathandabuzo okuba kuya kubakho amaxabiso aya kuphuhlisa indlela yokuziphatha engcono kunabanye kwaye kulapho ke kuya kufuneka uqondise imisebenzi yakho ukuze wenze imali evela kwimisebenzi yakho ibe yinzuzo. Ngenxa yokuba umngcipheko kulo nyaka uya kuba phezulu kakhulu kwaye ngokuqinisekileyo banokudala ngaphezulu kweyodwa ingxaki kuwe ukususela ngoku.
Ukuze ukwazi ukuhambisa utyalo-mali lwakho kulo nyaka ngokuchanekileyo, siza kuchaza ukuba ngawaphi amacandelo emarike yemasheya anokuwenza ngcono. Ziya kuba mbalwa kwaye zibambe ixesha kwaye apho amathuba amakhulu oshishino aya kugxila kweli xesha litsha lemarike yemasheya. Ngaphandle komba wobuchwephesha onokuthi uvelise okanye uvelise iinyanga ezidlulileyo. Kungenxa yokuba esiphelweni sosuku kumalunga nokukhetha amaxabiso esitokhwe ane- ukuxabisa okuphezulu. Ngale ndlela, izindululo azigqithiseli kwaye kuya kufuneka ukuba ube neenkcukacha kuhlalutyo.
Indawo yokuhlala kunye namacandelo azinzileyo
Amacandelo emarike yemasheya kufuneka akhethwe angakhokelwanga kukungazinzisi, kungasathembekanga kumatyala kwiakhawunti zabo zeshishini. Ukusuka kolu hlalutyo, ezona ndawo zizinzileyo nezikhuselekileyo zezona zinokwenza konke okusemandleni kulo nyaka unzima osilindeleyo ukusukela ngoku. Enye yazo imelwe yi iinkampani zombane ukongeza ekunikezeleni ngolu phawu lubalulekileyo, banikezela ngesivuno esinomdla kakhulu. Ngomdla ozinzileyo noqinisekisiweyo wonyaka omalunga neepesenti ezintlanu (5%) kuyo nayiphi na imeko apha ngentla ebonelelwa zizo zonke iimveliso zengeniso esisigxina ezingaphaya kwe-1%.
Ewe kunjalo, icandelo lokutya kufuneka libe lelinye lezinto ezizinzileyo kule ndawo ikhethekileyo yokufuna amathuba kwiimarike zezabelo. Akumangalisi ukuba baziphathe ngcono kunabanye ngamaxesha ukwanda kokungazinzi kwiimarike zezemali. Nangona kunjalo, enye yeengxaki eziphambili ekuzalisekiseni lo mnqweno kukuba zimbalwa kakhulu izindululo zemarike yemasheya kwizabelo zaseSpain. Awuyi kuba nokhetho ngaphandle kokuya kwiindawo ezonyukayo zamazwe aphesheya ukuba ufuna ukuba neendlela ezahlukeneyo ezizezinye kweli candelo libalaseleyo lendalo.
Ilanga kunye nolwandle kuya kuqhubeka kuphuma
La Umsebenzi wabakhenkethi eSpain iya kukhula kwi-2019 okokuqala kwiminyaka elishumi engaphantsi koqoqosho luphela ngenxa ye-dynamism esezantsi yeemarike zemithombo ephambili kunye nokubuyiselwa kweendawo ezikhuphisanayo kwiMeditera, ngokwe-Alliance for Tourism Excellence, Exceltur. Ngayiphi na imeko, i-Exceltur yehlise ukukhula kwezokhenketho eSpain ngo-2019 ukuya kwi-2,6%, ukusuka kwi-3,3% eqikelelwe ngo-Epreli, inani elisishumi ngaphantsi kokusebenza koqikelelo lwabahlalutyi kuqoqosho lwaseSpain (2,7%).
Nokuba yeyiphi na indlela icandelo lokhenketho ingangomnye wabadlali ababalaseleyo kwiimarike zezabelo. Ayothusi into yokuba, lishishini elikwindawo eyomeleleyo kunye nedatha engcono kunaleyo iboniswe kwamanye amacandelo afanelekileyo kwimarike yemasheya. Ukusuka kule nyaniso yecandelo, Sol Meliá, NH Iihotele okanye iAmadeus zenza iindlela ezigqwesileyo zokwenza ukuba ubutyebi bomntu bube nenzuzo ngeli xesha liqalileyo. Akumangalisi ukuba ingenakulityalwa ukuba iasethi eyimali esekwe elangeni nakwisanti inomdla kakhulu ekwamkeleni urhwebo kwimarike yemasheya.
Ngayiphi na imeko, akukho mathandabuzo ukuba enye yezimanga ezinkulu kulo nyaka inokuvela kumaqela ebhanki. Oku kuchazwa yinyani yokuba isohlwayo esomeleleyo siye savuka ngexesha le-2018 kwaye isenokuba lixesha lokufumana kwakhona kwixabiso lezabelo zalo ngokunikezela ngezaphulelo ezifanelekileyo kwixabiso ekujoliswe kulo kwezi nkampani zemali. Nangona kunjalo, umngcipheko usephakeme kunakwamanye amacandelo kuba agcina ingxaki efanayo njengangaphambili. Ukusilela kwezakhiwo ezinokubangela ukuba bawele kwizikhundla zabo.
Kwelinye icala, icandelo elilungileyo kwezi nkampani zidwelisiweyo lishiye malunga neepesenti ezingama-20 zoqikelelo lweemarike zentengiso kunyaka ophelileyo. Isohlwayo esiqatha kwaye mhlawumbi esigqithisileyo sabatyali mali esinokukhokelela kwiziphambeko ezibonakalayo kwixabiso lazo ukusukela ngoku. Zezokhuseleko ezinokuba ngumdla wokuziqesha ukuba zijolise ekusebenzeni kwexesha elifutshane. Co isakhono sokuphinda sihlaziye ngaphezulu kokubaluleka ngenxa yezaphulelo ezicatshulweyo okwangoku.
Enye into enokumangalisa: ubunewunewu
Ikwabonisa ukuba iinkampani ezidwelisiweyo ezimele icandelo lokunethezeka nazo zinokuqhuba ngcono kwiimarike zesitokhwe. Ngokwesiko bekusoloko kusenzeka ngale ndlela kwaye ngakumbi xa iimpawu zokuqala zobuthathaka zivela kwiimarike zezemali. Ngale ndlela, ayinakulityalwa ukuba icandelo lokunethezeka lichasene nokujikeleza kwaye linokuxhamla kule meko ekuthengeni. Ngaphandle kohlalutyo lobuchwephesha kwaye mhlawumbi nolona lusisiseko.
Ukuba ufuna ukujonga ngqo kweli candelo likhethekileyo, awuzukukhetha ngaphandle kokujonga ngqo kwizikwere zelizwekazi elidala, kulapho ke zidweliswe khona ezi zindululo kwimarike yemasheya yamanye amazwe. Kwezinye iimeko babonisa amandla okuhlaziya ngaphezulu kokucebisa ukuba bakumeme ukuba uqalise ukusebenza kweli candelo lezemali. Olunye lweempawu zalo ezichaziweyo kukuba zinjalo iinkampani eziguquguqukayo kakhulu ngokunxulumene nekoteyishini yabo kwaye banokwenza ukuba ufumane imali eninzi kwisithuba esifutshane kakhulu sexesha. Nangona ngexabiso lokuthatha uthotho lweengozi ezinokuthi zisisindise isicwangciso-mali sakho.
Kule meko kukho iindlela ezimbini eziphikisanayo ngokupheleleyo. Kwelinye icala, banokwenza kakuhle kakhulu kulo nyaka ngenxa yokucaca kwabo unxibelelwano nomsebenzi wabakhenkethi, apho ukuhamba kwabahambi kubonisa ulungelelwaniso oluphezulu kwaye kuhlala kulungile. Ukuze ngale ndlela, babe yinxalenye ebaluleke kakhulu kwipotfoliyo yakho entsha ngenxa yomdla wabo ongathandabuzekiyo emehlweni abatyali mali.
Kodwa kwelinye icala, olona xanduva lwayo kukuba izabelo zalo zinokuqhubeka nokunyuka kulo nyaka mtsha amaxabiso aphezulu afikelela kwintengiso. petroleum. Ngaphezulu kwamanqanaba eedola ezingama-80. Oku kuya kuguqulela ekubeni buthathaka kwixabiso lezabelo zalo. Ayothusi into yokuba ubudlelwane babo buthe ngqo kuba ixabiso leoyile ekrwada liphezulu, izabelo ziyahlupheka kumaxabiso azo kwiimarike zezemali. Ngaphandle kwezinye izinto ezinokuchazwa kwamanye amanqaku.
Ngayiphi na imeko, iya kuba lelinye lamacandelo ekufuneka liqwalaselwe kwezi nyanga zilishumi elinesibini zizayo. Ubuncinci ukwenza imisebenzi ekhawulezileyo apho inzuzo eyomeleleyo yemali inokuveliswa. Kwaye nakweyiphi na imeko, njengenye yezimanga ezinkulu ezinokuziswa ngu-2019.Njengoko uzakubona, izindululo zeshishini azizukusilela ngale mihla kwaye ngoku kushiyeke ukuba ezi zibikezelo zizalisekiswe kwimarike yemasheya enokuba luncedo kakhulu kwiinyanga ezimbalwa ezizayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Amacandelo esitokhwe amahlanu anokwenza ngcono kwi-2019